ဟင်းချက်နည်းများ Archives - Page 8 of9- Latest Myanmar News
ထမင်းပေါင်းအိုး နှင့် ကိတ်မုန့်လုပ်မယ်
May 12, 2020 by Latest Myanmar News
အိမ်တွင်းဖြစ်ထမင်းပေါင်းအိုးကိတ်မုန့် ပါဝင်ပစ္စည်း ၁.ဂျုံ=ဆန်ချိန်ခွက်တစ်ခွက် ၂.သကြား=ဆန်ချိန်ခွက်တစ်ဝက် ၃.နွားနို့= ဆန်ချိန်ခွက်တစ်ဝက် ၄.ဆီ=ဆန်ချိန်ခွက်၃ပုံတစ်ပုံ ၅.ရှာလကာရည်=၃စက် ၆.ကြက်ဥ=၅လုံး ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့် ၁.ဇလုံသန့်သန့်၂လုံးအဆင့်သင့်လုပ်ထားပါ၊ကြက်ဥ၅လုံးကို အကာအနှစ်ခွဲပြီးဇလုံတစ်ခုချင်းစီထည့်ထားပါ။ ၂.ကြက်ဥအနှစ်ဇလုံ ထဲကို ဂျုံ၊ဆီ၊နွားနို့ ရောထည့်ပြီး ဂျုံလုံးလေးတွေမရှိအောင်နှယ်ထားပါ။ ၃.cream ရိုက်စက်မရှိတဲ့သူတွေအတွက် ကြက်ဥအကာဇလုံထဲကိုရှာလကာရည် ထည်ပြီးခေါက်ပါ(သကြားကို၃ပုံခွဲထားပါ)၊အမြုပ်ထွက်လာရင် သကြားကိုတစ်ပုံထည့်ပါ၊ အဆက်မပျက်ခေါက်ပေးရပါမည်၊အမြုပ်လေးတွေသေးပြီးဖြူဖြူလေးတွေဖြစ်ရင်သကြားနောက်တစ်ပုံထည့်ပါ၊အမြုပ်လေးတွေပျောက်ပြီးဖြူဝင်းလာပြီဆိုရင်သကြားနောက်ဆုံးတစ်ပုံထည့်ပြီးဆက်ခေါက်ပါ၊ cream ရသည့်ထိခေါက်ပါ။ Cream ဖြစ်မဖြစ်ကိုဝါးတူတစ်ချောင်းကိုအလယ်မှာစိုက်ကြည့်ပါ လဲမကျရင်cream ရပါပြီ။Cream ရိုက်စက်ရှိရင်လဲ အပေါ်ကအချိုးအတိုင်းပြုလုပ်ရပါတယ်။ creamရိုက်တာ၁၀မိနစ်ကြာပါတယ် ၄. ရိုက်ထားတဲ့ cream ကို ဂျုံနှယ်ထားတဲ့ဇလုံထဲကို ၃ခါခွဲပြီး ရောနှယ်ပေးပါ (နှယ်တဲ့နေရာမှာ ဇွန်းဖြင့်အပေါ်အောက်ဖြေးဖြေးနှယ်ပါ၊ လုံးဝမမွှေမိပါစေနဲ့နော် ) ၅. ထမင်းပေါင်းအိုးအောက်ခြေကို ဆီသုပ်ထားပါ နှယ်ထားတဲ့အနှစ်ကို အပေါ်ကနေ ထမင်းပေါင်းအိုးထဲ့ကိုလောင်းချလိုက်ပါ ၊ပြီးရင် အိုးကို ၅/၆ချက်လောက် မှပြီးချလိုက်ပါ လေခိုလေးတွေမရှိအောင်ပါ။ ၆. … Read more
ကြက်ဥ အပ်မှိုကြော်လေး ကြော်စားမယ်
ကြွပ်ကြွပ်ရွရွအရသာရှိလှတဲ့ မေမေ့လက်ရာ အပ်မှိုကြော် MI ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ။ အပ်မှိုဆိုတာ များသောအားဖြင့် မာလာဟင်း နှင့် ဟော့ပေါ့ပ်များမှာ ထည့်စားတာများကြပါတယ်။ အပ်မှိုကို ကြွပ်ကြွပ်ကလေး ကြော်စားလို့ရတယ်ဆိုတာ သိတဲ့သူနည်းကြပါသေးတယ်။ ဒီအပ်မှိုအကြွပ်ကြော်လေးအိမ်မှာကြော်ကျွေးလို့ကတော့ အရသာရှိလွန်းလို့ ၃မိနစ်အတွင်း ပန်းကန်ပါ ပြောင်သွားမယ်ဆိုတာ အာမခံလောက်အောင် အရသာရှိပါတယ်။ သင်္ကြန်ပိတ်ရက်မှာ ဘယ်မှမသွားပဲ အိမ်မှာနေပြီးချက်စားမယ်ဆိုရင်လည်း အဆင်ပြေလှပါတယ်။ကဲ..ဘယ်လိုကြော်မလဲကြည့်လိုက်ရအောင်။ လိုအပ်သောပစ္စည်း- အကြော်အတွက် – အပ်မှို၊ ကြက်ဥ နှင့် အကြော်ခံမှုန့်။အရသာအတွက် – ဇီယာစေ့မှုန့်၊ ငရုတ်သီးမှုန့်၊ဆား သုံးမျိုးရောကာ အမှုန့်ဖြူးသောဗူးထဲထည့်ထားပါ။ထိုနောက် ကြက်သွန်မြိတ်အနည်းငယ် ပါးပါးလှီးပေးထားပါ။ ပြုလုပ်နည်း ၁။ ကြက်ဥတစ်လုံးကိုခွဲပြီး အနှစ်ရောအကာပါ ရောခလောက်ထားပါ။ ၂။ အပ်မှိုကို ကြက်ဥခလောက်ထားသောရေဖြင့် ဟိုဘက်ဒီဘက်နံ့အောင် ဆွတ်ပေးလိုက်ပါ။ ၃။ ပြီးနောက် အကြော်ခံမှုန့်ဖြင့်ကပ်ပေးလိုက်ပါ။ ၄။ ထို့နောက် … Read more
May 7, 2020 by Latest Myanmar News
အလွယ်ကူဆုံးလက်ဖက်နှပ်နည်း​ လက်​ဖက်​ကို ​ရေမ​ဆေးခင်​ အရင်​ဆုံး လက်​ဖက်​ရိုးတံ ၊အရွက်​ကြမ်း၊​လေး​တွေ ​ရွေးဖယ်​ပစ်​ပါ။ ပြီးရင်​ ​ရေ ၂ ခါ ၃ခါ​လောက်​ သဲမပါ​အောင်​ ​ဆေးပြီး လက်​ဖက်​ကို​ရေစင်​​အောင်​ ညှစ်​​ပေးပါ။ ရေညှစ်​ပြီးသား လက်​ဖက်​ကို နဲနဲဖွပြီး ဆား ၊အချိုမှုန့်​နဲ့ လက်​ဖက်​အသားထဲအရသာဝင်​​အောင်​ ဆုပ်​ညှပ်​ပြီးနယ်​​ပေးပါ။ ( ဆားအချိုမှုန့်​နဲ့နယ်​တဲ့အချိန်​မှာ ဆီလုံးဝ မထည့်​ပါဘူး​နော်​။ အရသာ ငံသွားရင်​ ​ရေနဲ့အလွယ်​တကူ ပြန်​​ဆေးပြီး အရသာ ပြန်​ပြင်​လို့ရ​အောင်​လို့ပါ။) နယ်​ပြီးသား လက်​ဖက်​ကို အရသာ အ​ချိ အငံ မြည်းကြည့်​ပါ။ အဆင်​​ပြေပြီဆိုရင်​ ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ကြက်​သွန်​ဖြူနဲ့ ငရုပ်​သီိးစိမ်းကို လက်​ဖက်​ထဲထည့်​ ဆီ အနည်းငယ်​ထည့်​ပြီးနယ်​ပါရှင်​။ အချဉ်​ကြိုက်​ရင်​​တော့ သံပုရာသီး​လေး နည်းနည်းညှစ်​ထည့်​ပါရှင်​။သံပုရာသီးထည့်​နယ်​​တော့ အနံ့​လေးလဲ ပို​မွှေးတာ​ပေါ့ ပြီးရင်​ ဗူးအလွတ်​ထဲထည့်​ ဆီကို လက်​ဖက်​မြုပ်​သွား​အောင်​ … Read more
မေ့ရဲ့ သရက်ယိုထိုးနည်းလေး မျှဝေပေးပါမယ်ရှင် ✌ ပါဝင် ပစ္စည်း မချစ်စု သရက်သီး – ၄လုံး သကြား -၅၀သား ဆား -အနည်းငယ် ကွမ်းစားထုံး – ထမင်းစားဇွန်း ၂ဇွန်း မဆလာ – ၁ဇွန်း ငရုတ်သီးမှုန့်/အရောင်တင်မှုန့် – လဘက်ဇွန်း ၁ ဇွန်း ပြင်ဆင်ပုံ ပထမဦးဆုံး သရက်သီိးကို အခွံခွာပြီး ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ပုံစံလှီးထားပါရှင်။ကွမ်းစားထုံးထည့်ပြီး သရက်သီးမြုပ်အောင် ရေစိမ်ထားပါနော်။နာရီဝက်စိမ်ပြီး ရေစင်အောင် စစ်ထားပါ။ရေစစ်ရင် သကြားနဲ့ဆားထည့်ပြီး နယ်ထားပါနော်။ ပြုလုပ်နည်း ယိုထိုးမဲ့အိုးထဲကို သကြားနယ်ထားသော သရက်သီးတွေထည့်ပါ။မီးပူလာသည်နှင့်အမျှ သကြားတွေ အရည်ပျော်လာပါလိမ့်မယ် မွှေပေးနေပါရှင်။’မေ’ထည့်တဲ့သကြားအချိုးစားအတိုင်းဆို ပုံထဲကလို ခပ်ခြောက်ခြောက်လေးပါနော်။ အရမ်းလဲမချိုပါဘူး။ရွှဲရွှဲချိုချိုကြိုက်တဲ့သူက ၁၀သားလောက် ပိုကဲထည့်နိုင်ပါတယ်ရှင်။သကြားရည် ပျစ်လာပြီး ညောင်စေးလဲကျပြီ သရက်သီးအဖတ်လေးတွေလဲ ကြည်လာပြီဆိုရင် မဆလာ ထည့်ပါ။ … Read more
May 3, 2020 by Latest Myanmar News
ဝက်စတူးချက်နည်း ဝက်စတူး ချက်ဖိုိ့ လိုအပ်တာလေးတွေ 1.ဝက် သုံးထပ်သား(သို့)ပေါင်သား၅၀သားအတုံး ၁ တုံး 2. ဆီ – ၂ ဇွန်း 3. အညိုရောင် သကြား ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်းခွဲ 4. အခွံမခွါပဲ ဓါးပြားရိုက်ထားသော ကြက်သွန်ဖြူ အတက်ကြီး – ၁၅ တက် 5. နာနတ်ပွင့် ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်းခန့် 6. အမည်းရောင် ဖာလာစေ့ ၅ ခု 7. သုံးလက်မ အရှည်ခန့်် သစ်ဂျပိုး ၂ ချောင်း 8. ဂျင်း မညက်တညက်ထောင်းထု – ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း 9. chicken powder – ချင့်ချိန်ထည့်ပေးပါ။ … Read more
ကြက်ဥကိုစပြုတ်ပါ သစ်ကြ​ပွေး​ခေါက်/နံနက်ပွင့်/လက်ဖက်ခြောက်/နံနက်​စေ့/ကုလား​ပွေးရွက် /သကြား/ပဲငံပြာရည်အ​နောက်/ဟင်းခက်မှုတ် ထည့်​ပေးရပါမည်……ဆားမထည့်ပါနဲ့…ပဲငံပြာ​ရည်အ​နောက်ထည့်ရုံနဲ့တင်ရပါပြီရှင့် ရေ​နွေးဆူဆူထဲ ထည့်ပါ….. ကြက်ဥပြုတ်ကို အခွံအက်​အောင်ခွဲ​ပေးပါ ခုန ​ရေဆူဆူထဲထည့်ပြုတ်​ပေးပါ….ပြုတ်​နေရင်း​တောင်အနံအရမ်း​​မွှေးလို့…စိတ်မထိန်းနိုင်ဘူး ရေအပြည့် နှစ်​ရေခန့်ပြုတ်​ပေးပါ…..တညပြုတ်​ရေနဲ့နှပ်ထားပြီးရင် စားလို့အရမ်း​ကောင်းတဲ့လက်ဖက်ကြက်ဥရပါပြီ……. လက်ဖက်ကြက်ဥပြုတ်………….ကိုယ်သိသလောက်လေးလုပ်ပြတာပါ…. အိမ်မှာနေရင်း ….အစား​အသောက်တွေနဲ့ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါ​စေ……. Daw Mon Unicode ကွကျဥကိုစပွုတျပါ သဈကွ​ပှေး​ခေါကျ/နံနကျပှငျ့/လကျဖကျခွောကျ/နံနကျ​စေ့/ကုလား​ပှေးရှကျ /သကွား/ပဲငံပွာရညျအ​နောကျ/ဟငျးခကျမှုတျ ထညျ့​ပေးရပါမညျ……ဆားမထညျ့ပါနဲ့…ပဲငံပွာ​ရညျအ​နောကျထညျ့ရုံနဲ့တငျရပါပွီရှငျ့ ရေ​နှေးဆူဆူထဲ ထညျ့ပါ….. ကွကျဥပွုတျကို အခှံအကျ​အောငျခှဲ​ပေးပါ ခုန ​ရေဆေူဆူထဲထညျ့ပွုတျ​ပေးပါ….ပွုတျ​နရေငျး​တောငျအနံအရမျး​​မှေးလို့…စိတျမထိနျးနိုငျဘူး ရအေပွညျ့ နှဈ​ရခေနျ့ပွုတျ​ပေးပါ…..တညပွုတျ​ရနေဲ့နှပျထားပွီးရငျ စားလို့အရမျး​ကောငျးတဲ့လကျဖကျကွကျဥရပါပွီ……. လကျဖကျကွကျဥပွုတျ………….ကိုယျသိသလောကျလေးလုပျပွတာပါ…. အိမျမှာနရေငျး ….အစား​အသောကျတှနေဲ့ ပြျောရှငျနိုငျကွပါ​စေ……. Daw Mon